श्रीदेवी मृत्युप्रकरण रहस्यमय: दुबई पुलिसले बन्द गर्‍यो फाइल ? | Emedia Hub UK
Home Entertainment Bollywood श्रीदेवी मृत्युप्रकरण रहस्यमय: दुबई पुलिसले बन्द गर्‍यो फाइल ?
मुम्बई – अभिनेत्री श्रीदेवीको मृत्यू सम्वन्धमा छानविन बन्द गर्दै दुबई प्रहरीले बलिउड उनका आफन्तलाई शव बुझाएको छ ।
उनको मृत्यू ‘बेहोस भएपछि दुर्घटनाबस पानीमा डुबेर’ भएको ठहर गर्दै प्रहरीले फाइल बन्द गरेको हो ।
दुबईको होटल जुमेराह अमीरात टावरमा भएको श्रीदेवीको मृत्युले धेरै प्रश्न खडा गरिरहेको छ । मिडियाले हरघण्टा उनको मृत्युसँग जोडिएका नयाँ खुलासा गरिरहेका छन् ।
– बोनी कपुर आफ्नो भान्जाको विवाहमा पत्नी श्रीदेवी र कान्छी छोरीसँग दुबई पुगेका थिए । तर, विवाह सकिने बित्तिकै उनी मुम्बई फर्किए । उनी एक दिनका लागि श्रीदेवीलाई छाडेर किन भारत फर्किए ? फेरि श्रीदेवीलाई सरप्राइज दिन किन दुबई पुगे ?
डाक्टरहरुले प्रश्न उठाएका छन्, बाथटबमा लडेर उनको मृत्यु भएको हो भने उनको शरीरमा किन कुनै चोटको निशान छैन ?
श्रीदेवीले कति रक्सी पिएकी थिइन् कि उनले आफूमाथि नै नियन्त्रण राख्न सकिनन् ? किनभने कपुर परिवारका मित्र अमर सिंहको बयानका अनुसार श्रीदेवी कहिले पनि हार्ड ड्रिङ्क पिउँदिन थिइन् । सार्वजनिक रुपमा उनी कहिलेकाहीँ वाइन मात्र सेवन गर्थिन् ।
– त्यसो भए के कसैले श्रीदेवीलाई जबर्जस्ती रक्सी खुवाएको थियो र पछि लगेर बाथटबमा फाल्यो ?
– बाथरुममा श्रीदेवी पुग्नअघि नै बाथटबमा पानी कसरी भरिएको थियो ? के कसैले जानीजानी बाथटबमा पानी भरेको थियो ?
–जाँचबाट यो पत्ता लागेको छ कि बोनी कपुरले सबैभन्दा पहिले डाक्टरभन्दा आफ्नो साथीहरु फोन लगाए । उनले किन यस्तो गरे ?
– पोष्टमार्टम रिपोर्टमा बाथटबमा डुबेर उनको निधन भएको भन्ने कुरामा पनि विवाद छ । किनभने बाथटब कुनै स्वीमिङ पुल होइन जहाँ एक सामान्य मानिस लडेर उठ्न नसकोस् ।
–भान्जाको विवाह सकिएपछि श्रीदेवी आफ्नो बहिनीसँग दुबईमा बसेकी थिइन् । उनले बहिनीसँग केही समय बिताउन चाहेको बताइएको थियो । तर, मिडिया रिपोर्टका अनुसार श्रीदेवी ४८ घण्टादेखि होटलभन्दा बाहिर नै निस्केकी थिइनन् ।
–जब राती ९ बजे श्रीदेवीसँग यत्रो ठूलो हादसा भयो भनिएको छ, यसबारे ६ घण्टापछि मात्र किन बाहिर जानकारी दिइयो ?
– होटल स्टाफले कुराकानीमा राती १०ः३० बजेतिर श्रीदेवीले पानी अर्डर गरेको बताएका छन् । करिब १५ मिनेटपछि होटलका कर्मचारी उनको कोठामा पुगेको थियो । तर, उनले ढोका खोलिनन् । केही नराम्रो भएको आशंकामा स्टाफले होटलको अल्राम बजाएका थिए । त्यसपछि ढोका खोलिएको थियो । श्रीदेवी बाथरुमको भूइँमा थिइन् । उनको पल्स चलरिहेको थियो । त्यतिबेला ११ बजेको थियो । होटलको स्टाफको बयानले घटनामा थप रहस्य थपेको छ । यस बयानमा बोनी कपुर गायब छन् ।